Usofa noPestle, uPestle noMbumbi, I-Marble Tray - iKingway
Iphaneli Elikhulu Kakhulu
Isiphuzo noma isidlo sakusihlwa
Shijiazhuang Kingway Imp. & I-Exp. Co, Ltd yasungulwa ngo 2 0 0 8 futhi itholakala shijiazhuang idolobha, isifundazwe Hebei, China, zokuhamba kuyinto elula futhi imvelo muhle. Ifektri yethu yokubambisana ihlanganisa indawo yamamitha skwele ayi-33,000 futhi inabasebenzi abangama-82. Kukhona imigqa emine yokukhiqiza efana nokusakaza kwe-DISA, preseasoning, enamelling.
ISIVIVINYO NEZINSELELE ZAMAHHALA
Isidumbu kanye nePestle
Iphelele ngokuchoboza izinongo zonke nokwenza izixube zezinongo. Umqondo wokuxuba nokukhonza i-guacamole-noma ukwenza i-pesto namanye amasoseji avuthayo.
Sakaza i-Iron Cookware
Iphelele ukupheka nokusiza izingxenye ezithile zemifino, izinhlangothi kanye nama-dessert, Inikeza ukugcinwa kokushisa okungenakuqhathaniswa ngisho nokushisa; izimbobo zokumboza ngokunambitheka ngenkathi izibambo zivumela ukuthutha okulula
Indwangu: Imabula yemvelo noma ubukhulu begranite: I-20x15x3cm Ukupakisha: ibhokisi lesipho noma ibhokisi elinsundu I-marble noma ugqoko lomgqomo • Okulungele ukusebenzisa ibhodi le-khekhe • kulula ukulihlanza. • ukwakheka nosayizi kwenziwa ngokwezifiso. • ukuxhumana okuphephile kokudla futhi sinombiko we-LFGB ne-FDA.
Indwangu: ubukhulu bemabula yemvelo: dia.13cm, ukuphakama 8cm Ukupakisha: ibhokisi lesipho noma ibhokisi elinsundu iMarble Mortar nePestle • Elungile ngokuchoboza izinongo zonke nokwenza izixube zezinongo. • Ilungele ukuhlanganisa nokukhonza i-guacamole-noma ukwenza i-pesto namanye amasoseji avuthayo. • Line namahlamvu ulethisi ozowasebenzisa njengesitsha esisebenzela zonke izinjongo. • Ukugcotshwa okungaphakathi kwodaka kusiza ukuchoboza nokugaya izithako. • I-pestle esindayo iyakusebenzela, iqinisekisa ukugaya okusebenzayo, ukuxubha nokuxuba.
Indwangu: Imabula yemvelo noma ubukhulu begranite: 43x30x1.5cm Ukupakisha: ibhokisi lesipho noma ibhokisi elinsundu IMarble noma i-granite chopping board • Iphelele ukusika noma ukukhonza zonke izinhlobo zokudla. • Kulula ukuyihlanza. • ukwakheka nosayizi kwenziwa ngokwezifiso. • ukuxhumana okuphephile kokudla futhi sinombiko we-LFGB ne-FDA.
Isigcawu se-Iron Preseasoned
igama lomkhiqizo cast iron reversible griddle diam 43x23cm ukuphakama 1.5cm okuhlanganisiwe kokuqala ukupakisha ibhokisi elinsundu noma umbala wombala logo okwenziwe ngokwezifiso Isici sokushisa ukushisa okuphezulu kwe-Superb Kufanelekile kuzo zonke izitolo eziphakeme ngokuphelele Zokupheka nokusebenzela izingxenye zemifino, izinhlangothi, kanye nama-dessert Inikeza ukugcinwa kokushisa okungafani nalutho ukufudumeza; ama-lid seal ekunambithekeni ngenkathi izibambo zivumela ukuthutha okulula i-FDA evunyelwe yensimbi yangaphambi kokukhula evunyelwe ukusetshenziswa ngokushesha Kungaba ...
igama lomkhiqizo cast iron casserole ene-lid ububanzi 10cm, 26cm ukuphakama 5cm, 11.5cm coating preseasoned packing brown brown or color box logo sici eyenziwe ngokwezifiso Ukushisa okuphezulu kokugcina ukushisa kufanelekile kuwo wonke ama-stovetops Perfect ekuphekeni nasekusebenzeni izingxenye ezithile zemifino, izinhlangothi, kanye nama-dessert Inikeza ukugcinwa kokushisa okungenakuqhathaniswa ngisho nokushisa; izimbobo zokumboza ukunambitheka ngenkathi izibambo zivumela ukuthutha okulula i-FDA evunyelwe yensimbi yangaphambi kokukhula evunyelwe ngokushesha ...
Inombolo yento KAR26 Round Casserole D: 21.5cm 24cm 26cm 28cm Oval Casserole 28x21cm 30x23cm Izici Stainless iron knob kanye izibambo ze-loop zokulawula okukhulu kombala obomvu, ophuzi, ohlaza okwesibhakabhaka, opinki, omnyama, o-obenji be-enamel okuhlanganisa 1.Heavy-task enamel 2. Ukusatshiswa okuphezulu kokuphakama nokugcinwa kwe-3.Cast heats he slowly slowly and evenly ngokulinganayo 4.Peritive for slowlyl ukupheka Izici: I-stainless iron knob ne-loop handles for great control Smooth ingilazi ingaphezulu ngeke isabele kwizithako uProf ...